Semalt - I-World Renown Digital Agency
ISemalt yinhlangano edijithali edume umhlaba wonke esebenza ngokukhethekile ku-Injini Yokucinga kanye nakuwebhusayithi Analytics. Kusukela ngesikhathi uqhafaza kuwebhusayithi yabo, kuyacaca ukuthi banokuqonda okujulile kokuthi bangaheha kanjani ukunakwa online ngokuqukethwe kwabo okubhalwe ngokucophelela, baqonde ezenzweni, kanye nokusebenzisa umbala ngendlela efanelekile. Njengoba sinethimba lochwepheshe abafundile abasebenza kahle ezilimini eziningi, kulula ukubona ukuthi kungani uSemalt enamakhulu ezibuyekezo ezinhle nemiphumela evela kuwo wonke umhlaba. O, futhi ngeke ukhohlwe ukusho sawubona ku-Turbo Turtle!
Ngaphambi kokuthi sigxume emaphaketheni abo, ake sihlephule konke abakwenzayo.
I-Search Engine Optimization (eyaziwa nangokuthi i-SEO) ikhulisa ithrafikhi ngenkuthalo eqondiswa kuwebhusayithi yakho ngokwandisa ukubonakala kwekhasi lakho ku-Injini Yokucinga. Ukuze uvele kumphumela wokusesha we-Injini Yomsebenzisi, ikhasi lakho lizodinga ukukhonjiswa. Ukukhonjwa yinqubo ye-Injini Yokucinga eqoqa imininingwane nge-Spider (eyaziwa nangokuthi yi-Bot noma i-Crawler) ngakho-ke kungakwazi ukuhlela okuqukethwe okuhambelana nakho konke okunye okuku database yayo. Ukuze i-Spider ithole ikhasi lakho, zizodinga ukuthola isixhumanisi sakho ngenkathi ihlola enye iwebhusayithi. Lokhu okutholakele kubizwa nge-Backlinking.
Uma nje iSicabucabu sithola ikhasi lakho, sizowuqoqa wonke umkhondo wolwazi esingaluthola size sihlukaniswe isayithi lakho. Injini Yosesho izonikeza okuqukethwe kwakho amaphuzu afanele, angasiza noma alimaze ukubekwa kwakho kwe-SERP (Amakhasi Wemiphumela Yosesho). Lapho Injini Yokucinga ibeka ikhasi lakho, izokwahlulela izinto ezilandelayo:
Ulimi lokuqukethwe: Ingabe umsebenzisi angafunda okuqukethwe kwakho?
Okuhlobene nokuqukethwe: Ingabe okuqukethwe kwakho kuyahambelana nethemu yosesho?
Umbhalo Womzimba: Okuqukethwe kwakho kufana kanjani nethemu lokusesha?
Isihloko Sekhasi: Yiliphi iphuzu eligxile kulo mbhalo wakho?
Izithombe Nemifanekiso: Ingabe izinto ezibonakalayo zikuxhasa okuqukethwe kwakho?
Indawo: Ingabe indawo yakho yokuqukethwe incike?
Ngawo wonke ama-SEO akho akleliswe kahle, kufanele ube nokusakazeka okungaguquki kwamakhasimende angasebenza ngokuchofoza kuwebhusayithi yakho. Kepha ungasho kanjani ngokungapheli ukuthi iwebhusayithi yakho ifinyelela izethameli zayo? Hhayi lokho kuphela, kodwa ungasho kanjani ukuthi izilaleli zakho zisabela ngendlela ofuna ngayo? Impela, singawubheka njalo umbiko wakho wokuthengisa bese sahlulela lokho. Kodwa wonke umbiko wokuthengisa ukutshela ukuthi yimalini oyenzile. Uma ufuna ukuqonda ngokweqiniso ukuthi ikhasimende lisabela kanjani kuwebhusayithi yakho, uzodinga ukumba ujule ohlelweni lweWeb Analytics.
Ama-Web Analytics asetshenziselwa ukukala, ukuqoqa, nokuhlaziya imibiko ngesifiso sokuqonda imikhuba yezilaleli zakho ukuze wenze kahle iwebhusayithi yakho. Lezi zinhlelo zizokunikeza ulwazi olusemqoka ezintweni ezilandelayo.
Inani eliphelele Lokuvakasha Okuhlukile
Inani eliphelele Lokuvakasha Okuphindwayo
Lokho miningi imininingwane ongayihlola! Kepha kubalulekile ukuthi ube nalokhu ngoba kuzokusiza ukwengeza ukubakhona kwakho kuwebhu ngokugcwele. Ngama-Web Analytics, ungenza isinqumo esiqondile kulokhu okulandelayo:
Nquma ukuthi imaphi amagama angukhiye aqhuba ithrafikhi esayithini yakho.
Nquma ukuthi imuphi umkhiqizo oqoqa ukunaka okukhulu.
Amanani wokushintsha asuselwa ekuxhumaneni kwamakhasimende.
Amathuba Spot ukuthuthuka.
Dala okuqukethwe okuqondiswe kubantu bakho.
Yize kungenzeka ukwenza konke lokhu ngokwakho, kuzokuthatha isikhathi ukuthi wenze ibhizinisi lakho ngokugcwele. Njengasempilweni yangempela, ngaso sonke isikhathi uzoheha abathengi abaningi bewindows kunokwenza amakhasimende uqobo. Ngakho-ke udinga ukubeka umzamo wakho omuhle phambili ukudonsa abantu abaningi ngangokunokwenzeka. Futhi yingakho kufanele uqashe uSemalt!
Uma ubheka ikhasi labo lamacala , basize amakhulukhulu ezinkampani emhlabeni wonke ukuthola izinamba zokuchofoza ezidingekayo ukuze uzuze. Icala ngalinye linesixhumanisi esiya kulokhu okulandelayo:
Ngaphambi nangemva Kwemetri Amashidi
Njengoba ubona esiqeshini engisinikeze ngenhla, uSemalt wandisa lezi zinkampani ukubalwa kwezivakashi njalo ngenyanga kubasebenzisi abangu-114 kuya kubasebenzisi abayi-1,771! Lokho kuyizikhathi eziyi-15 inani labasebenzisi ababenalo phambilini! Lokhu yilokho ikhasimende elithe ukukusho ngemiphumela yabo:
Futhi uma ukubuyekezwa okubhaliwe nezinombolo ezinzima kunganele, uSemalt futhi unekhasi elinikelwe ukubuyekezwa kwevidiyo. Lokhu kubuyekezwa kuqhamuke kumakhasimende anelisekile emhlabeni wonke!
Ngakho-ke uSemalt angakunika kanjani imiphumela efanayo? Into yokuqala ongayenza ukusebenzisa ithuba labo lokunikezwa kwecala elenziwa nguYavuz kusuka ku-upasuajitr.com. Ngokushesha nje lapho uqhafaza ku-Semalt.com, uzothola ibha ezohlaziya ngokushesha iwebhusayithi yakho. Ukuze ubone lo mbiko, konke okufanele ukwenze ukudala i-akhawunti. Lo mbiko uzofingqa imiphumela eyithole ekhasini lakho lewebhu futhi uncome iphakethe elingasiza ukwandisa le miphumela. Lawo mapakheji afaka i- AutoSEO , i- FullSEO , ne- Analytics.
I-AutoSEO ikunika amathuluzi alandelayo:
Ukuthuthukiswa Kokubonakala Kwewebhusayithi
Ucwaningo lwegama elingukhiye
Imibiko YeWebhusayithi Yokuhlaziya
Lezi zingqinamba zokwakha ezidingekayo ukuqalisa umkhankaso we-SEO ophumelelayo! Noma ngabe ufunda i-SEO njengoba uya, amathuluzi atholakala kuwe kwiphakethe ye-Auto SEO kulula ukuwasebenzisa kuwebhusayithi yakho. Lona ukuthenga okungabizi kakhulu, okusheshayo, futhi okusebenzayo okunikezwa yiSemalt.
Ungathenga isilingo sezinsuku eziyi-14 ngamasenti angama-99. Ngemuva kwalokho, ungathenga izinqwaba zanyanga zonke ngamanani alandelayo:
Inyanga eyi-1 $ 99
Izinyanga ezintathu ngama- $ 267
Izinyanga eziyi-6 ngama- $ 504
Unyaka owodwa ngama- $ 891
Iphakheji ye-FullSEO inomunye wochwepheshe abafezekile bakaSemalt owenza okulandelayo:
Ukulungiswa Kwephutha Iwebhusayithi
Ngaleli hlelo, inhloso kaSemalt ukucindezela iwebhusayithi yakho iye phezulu kakhulu kumaSERPs. Omunye wabo msebenzi ophumelele wabelwe ikhasi lakho ukuze bakwazi ukusebenzisa zonke izinsiza abanazo ukwenza ikhasi lakho liphumelele kakhulu. Njengoba ubonile ngenhla nge- upasuajitr.com, bangagxuma bangene ekhasini bese beqala ukusebenza ngomlingo wabo ngaso leso sikhathi.
Futhi uma kwenzeka ufuna ukwazi okwengeziwe ngochwepheshe babo, ungathola izithombe zabo kuwebhusayithi yonke. Isibonelo, uYana Shafarenko (Isazi se-SEO) kanye no-Natalia Khachaturyan (Isazi sokuqukethwe) sikhonjiswa "njengokuqapha amazinga akho" ekhasini lokuqala lewebhusayithi kaSemalt. Ngezansi kwabo kukhona uhlu lwezinto abazifezile abazisebenzele ngenkathi besebenzela uSemalt.
Iningi labo ochwepheshe nabo babhala izindatshana zeblogi kaSemalt. UVladislav Polikevych (Copywriter), u-Olga Pyrozhenko (Umphathi Wezokumaketha), no-Eugene Serbin (iNhloko ye-SEO) babhale izindatshana eziningana ngezimo zamanje ze-SEO futhi basebenzisa inzuzo emakethe yakho. Futhi ngishilo ukuthi banamakhasi angama-26 ezihloko ze-blog? Njengoba sinezinto ezinhlanu ekhasini ngalinye nezindatshana ezimbili zokugcina, leyo ingqikithi yezindatshana eziyi-127 (kusukela manje) ezitholakala MAHHALA! Phakathi kobufakazi bamakhasimende abo kanye nezindatshana abanikeza zona mahhala kubhulogi labo, unezinsizakusebenza eziningi ongazisebenzisa ngaphambi kokwenza isinqumo sokuthenga iphakheji ye-SEO ephelele ye-Semalt.
Iphakethe le-SEO eligcwele liyahluka phakathi kwamakhasimende, ngakho-ke, ngeshwa, angikwazi ukukunikeza inani eliqondile. Kepha njengoba ngike ngasho ngenhla, inani elimangazayo lokubuyekezwa okuhle nemikhankaso ephumelelayo ikhuluma ngokuthi libaluleke kangakanani iphakethe likaSimalt's Full SEO. Zibuye zinikeze izephulelo uma ubhalisela ukubhalisa njalo ngenyanga:
Izinyanga ezintathu zinika u-10% ukhiphe
Izinyanga eziyi-6 zinika u-15% wokukhipha
Izinyanga eziyi-12 zinika ama-25% ukukhipha
Ekugcineni, kune-Semalt's Web Analytics package, efaka izinsizakalo ezilandelayo:
Hlola amawebhusayithi ancintisanayo
Khomba amathuba okusebenziseka ekhasini
Leli yiphakethe elikutshela uma wonke umsebenzi wakho ukuholela empumelelweni noma ukwambula ukuthi unomsebenzi omningi okufanele uwenze. Ngaphandle kwalolu lwazi, awunakukwazi ukuhambisa iwebhusayithi yakho phezulu kuma-SERPs, noma uhlale phezulu uma usuvele ukhona. Ulwazi ngamandla. Futhi ngalawo mandla, ungenza okunye kokulandelayo:
Sula umncintiswano wakho ukuze ubone ukuthi benzani
Qhathanisa ucwaningo lwakho lwegama elingukhiye nalokho okwenzekayo njengamanje
Thola amathuba ngaphakathi kuwebhusayithi yakho
Mayelana namanani entengo, anikela ngamaphakeji anegama elingukhiye nomkhawulo wephakheji. Babukeka kanjena:
$ 69 / ngenyanga yamagama angukhiye angama-300, amaphrojekthi ama-3, nezinyanga ezi-3 zomlando wesikhundla
$ 99 / ngenyanga yamagama asemqoka ayi-1,000, amaphrojekthi ayi-10, nonyaka ongu-1 womlando wesikhundla
I- $ 249 / ngenyanga yama-keywords angama-10,000, amaphrojekthi angenamkhawulo, nomlando wesikhundla ongenamkhawulo
Uma ubhalisela izinyanga eziningi, ungagcina okulandelayo:
Phakathi kwazo zonke izibuyekezo ezinhle uSemalt azibonisa ngokuziqhenya kuwebhusayithi yabo, ama-blogs kanye nokudumisa okungokwabo abafundile abasebenza ngezilimi eziningi, kanye nentengo yabo engabizi, kulula ukubona ukuthi kungani uSemalt engenye yezinhlangano ezinhle kakhulu zedijithali emhlabeni. Ukuphequlula iwebhusayithi yabo, ungabona ukuthi bakukhathalela ngempela lokho abakwenzela i-SEO ne-Analytics